တရုတ်မှာ 2021 ခုနှစ်ရဲ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Kpop Album များ | News Bar Myanmar
တရုတ်မှာ 2021 ခုနှစ်ရဲ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Kpop Album များ
Kpop ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအားက တရုတ်မှာလည်း ကြောက်ခမန်းလိလိပါဘဲ။ Kpop fan တရုတ်မတွေဟာ idol ကို support တဲ့နေရာမှာ အကြမ်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Digital Album တွေဆို fanbase တခုထဲကနေ အများကြီးဝယ်ပစ်တာမျိုးအထိ တော်တော်လည်း ချမ်းသာကြပါတယ်။ ခုဖော်ပြသွားမှာကတော့ တရုတ်မှာ 2021 ခုနှစ်ရဲ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Kpop album တွေဖြစ်ပါတယ်။
1. IU – “LILAC” (345,078)
2. EXO – “DON’T FIGHT THE FEELING” (331,823)
3. HyunA – “I’m Not Cool” (282,649)
4. Baekhyun – “Bambi” (237,677)
5. NCT Dream – “Hot Sauce” (109,953)
6. Super Junior – “The Renaissance” (78,993)
7. Epik High – “Epik High Is Here 上” (44,425)
8. Kang Seungyoon – “PAGE” (42,799)
ခုလက်ရှိမှာတော့ IU ရဲ့ ငါးခွေမြောက် studio album “LILAC” က ရောင်းအားအကောင်းဆုံး album အဖြစ် စံချိန်တင်ထားပါတယ်။ ဒီ album ဟာ တရုတ်မှာတင် hit ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဖူး။ Korea မှာလည်း နာမည်ကြီးလျှက်ရှိပြီး album ထွက်ထွက်ပြီးချင်းတရက်မှာတင် အချပ်ရေ 216,319 copies လောက် ရောင်းချခံခဲ့ရပြီး ပထမတပတ်အတွင်း ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ဒုတိယ Kpop အနုပညာရှင် အမျိုးသမီး အဖြစ် မှတ်ကျောက်တင်ခံခဲ့ရပါတယ်။
“LILAC” album ရဲ့ side track တွေအကုန်လုံးလည်း Gaon Digital Chart ရဲ့ top 30 ထဲ ဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ IU ရဲ့ အရင်က ထွက်ရှိပြီးသား သီချင်းတွေလည်း ထို chart ထဲကို ပြန်ဝင်လာပါသေးတယ်။ 2021 ခုနှစ်ရဲ့ May လမှာတော့ “Korean Music Content Association (KMCA)ကနေ “LILAC” album ဟာ 250,000 copies လောက်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် platinum အဆင့် အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
EXO အဖွဲ့ရဲ့ ခုနှစ်ခုမြောက် mini album “DON’T FIGHT THE FEELING” ကတော့ ထွက်ရှိပြီး နှစ်ရက်အတွင်းမှာတင် တရုတ်မှာ 331,823 အချပ်ရေ ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီစာရင်းရဲ့ Top2မှာ လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ ခုလို နေရာယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကြောင့် Kpop အဖွဲ့တွေထဲလည်း ရောင်းအားအမြင့်ဆုံး album ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် EXO အဖွဲ့ဟာ တကမ္ဘာလုံးမှ ဝယ်ယူလိုအား preorder sales နဲ့တင် အချပ်ရေ 1.22 million လောက် ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် million seller ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ထပ်ရရှိခဲ့ပြန်ပါပြီ။
ဒီ record က EXO ရဲ့ “Don’t Mess Up My Tempo” ရဲ့ preorder sale 1.1 million ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး စံချိန်အသစ် ထပ်ချိုးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ရဲ့ QQ music မှာတော့ “DON’T FIGHT THE FEELING” album ဟာ 590,000 digital pre-saves ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ 2021 ခုနှစ်မှာ ဒီရောင်းအားရခဲ့တာ EXO က ပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Next ၂၀၂၁ အ​စောပိုင်းမှာ ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ God Itthipat နဲ့ Richy Oranate တို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း »
Previous « BamBam ပြောတဲ့ အားတက်စရာ ကျန်းမာစွာဝိတ်ချနည်းအသစ်